Ifulethi elithandekayo kumbindi wedolophu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguManuelle
Indawo entsha nentle yodidi oluphezulu kumbindi weMiddelburg. Ibhedi ekhululekile kunye negumbi lokuhlambela, umgangatho ophezulu wokugqiba kunye nesitayela. Indlu ifakwe kakuhle kakhulu kwaye ipholile ngokumangalisayo ehlotyeni kwaye ikhululekile ebusika. I-terrace yangasese enetafile enkulu kunye nelanga elimnandi lasekuseni. Yonke into ijikeleze ikona ... isidlo sakusasa, ivenkile yokubhaka, ivenkile enkulu, iivenkile, iindawo zokutyela kunye nazo zonke izakhiwo zakudala. Ukupaka imoto okanye isithuthuthu kwintendelezo yabucala. Ulwandle lukwiikhilomitha ezi-6 kuphela ukusuka kwiziko lethu elihle. Ngokufutshane, yonwabele!
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ekhethekileyo esixekweni kwaye ikufuphi negadi yethu enkulu. Kuthe cwaka kwaye kuthelekiswa ngokumangalisayo noko kuphithizela emva kweendonga!
5.0 ·Izimvo eziyi-54
Isidlo sakusasa esimnandi e-De Juf okanye ufumane isidlo sakusasa kwi-bakery yaseBliek, unezona bholusi zinencasa. Iindawo zokutyela kwiDam Square kunye neReigerstraat okanye kunjalo kwiMarike.
IMyuziyam yaseZeeuws kunye neAbbey zikufuphi nje ekoneni, njengazo zonke izitrato ezintle. Konwabele ukuthenga noosomashishini bokwenyani esixekweni. Okanye thatha ukhenketho olumangalisayo lweziko kwaye wazi zonke iimfihlo kunye neenyani zesixeko kwangoko.
Umbuki zindwendwe ngu- Manuelle
Silusapho olusebenzayo kwaye asibikho kakhulu emini.
Ukuba ufuna uncedo olukhethekileyo okanye unezikhalazo zonyango, ungabhalisa. Sisenokukwazi ukukunceda ngenkathalo okanye ngeendlela ezahlukeneyo zonyango. Singaqinisekisa kwakhona ukuhlala kamnandi kwabo bagula ngokungapheliyo. Le ndlu ayilungiselelwanga ngokukodwa izitulo ezinamavili kwaye inomda weshawa.
Ukuba ufuna uncedo olukhethekileyo okanye unezikhalazo zonyango, ungabhalisa. Sisenokukwazi ukukunceda ngenkathalo okanye…